Home Wararka (Daawo) Kullane Jiis oo jebiyay amarkii Rooble. (Xilka maka qaadi karaa?)
(Daawo) Kullane Jiis oo jebiyay amarkii Rooble. (Xilka maka qaadi karaa?)
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimuu ayaa shaaciyey in maanta laga celiyey garoonka diyaradaha magaalada Muqdisho, isagoo kusii jeeday Gobolka Gedo.
‘isma lahayn garoonka ayaa dad laga soo celin doonaa, markii uu soo baxay amarka ra’isal wasaaraha.. Qoladii diyaaradda ayaa lala hadlay, waxaana loo sheegay in Macalimuu iyo dadka la socda aanay bixi karin.. Waxaan ka dalbanay in cidda na heysta ay nooo caddeeyeen, waxayna noo sheegeen inuu amarka bixiyey C/llaahi Kulane oo Nabadsugidda madax ka ah..” ayuu yiri Guddoomiyihii hore ee Gedo oo Ra’iisal wasaaraha ugu baaqay inuu is casilo ama xilka ka qaado Kulane Jiis.
“Halkan waxaan ku xayirranahay 7 bilood, Kulane Jiis wuxuu u adeeggaa Farmaajo oo aniga ii yeeray markaan Xamar imaanayey.. Wa ceeb in awoodda Ra’iisal wasaaraha la isticmaalo.. Amarkii Ra’iisal wasaaraha ee la wada maqlayey inuu diido sarkaal NISA ka tirsan waxaa la oran karaa inuusa Ra’iisal wasaare jirin…” ayuu yiri Macalimuu oo sheegay inay jawaab ka sugayaan Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
“Waxaa ceeb ah maanta in Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya oo Amniga dalka iyo amarka heysta inta Xukuumad laga dhisaayo amarka uu bixiyay cida diiday malaha meel kale ayaa laga xukumaa waxaan ku qanci karnaa in Kulane jiis Xilka laga Qaado” ayuu sii raaciyey.